As Cophxee Keen Dhabe, Asiin Jira Jedhii Garaa na Ciibsi!! - Xalayaa Jaalalaa
As Cophxee keen dhabe!
Ganama barii barraaqan ka’e barbaacha kee. Halkan deemtee fi guyyaa deemtee kee quba hin qabu. Ollaas gaafadhu deebii hin arganne. Hunduu akka durba manatti ulfooftee waa’ee kee na dhoksa. Anoo maali waansaa akka tasaa waa uumamee manatti ulfooftee dhokattee laata jedheen shakkeyyuu. Egaa yoo na dhageesseef xalayaa koo kana qalbiin dubbifadhu. Sababa keettan galaana daaka, bosona cillim jedhe cabsa, awwaarri koomee miilaa na ciree lafee kootti na hambise. Foon maddii na dhumee illeen bishaan hullee sagal na fixa. Hirriba hin qabu qalbiinan jooree jaawwara. Buddeena abjuu natti taatee hirriba keessa budduuksee cuffadhee, duubaa fi fuuldura kee dhungadhee hirribaa haa ta’u maaraatummaa gaafan keessaa dammaqu harka koorra hin jirtu. Maal ta’a abjuun natti dhufuu baattee jedheetan deebi’ee ofitti aara.
Yeroo tokko tokkommoo baguman ishee jaaladhe abjuun arguun kooyyuu carraa qabaachuu kooti jedheetuman of jajjabeessa. Amma amma kophaa koon akka nama ilmaan awwaaleen ofitti odeessaa deema. Dhugaa dha ani waanan hin awwaaliin maalan qabaa? Hundan awwaale, kan hafe ana qofa. Osoo dhuftaa kee eeguu anuu guyyaa awwaala koo lakkaawwachaan jira. Atis daftee bakka baddee deebitee jaarsaanis ta’u jaariin si hin araarfanne, ykn haftee abdii koo kutadhee gara boqonnaa bara baraa kootti hin deemne akkanattan jiraa fi du’aa gidduu deddeema akka ijoollee kajeellaa bartee. Hamiin sehe malee waa hedduun gurra koo keessa ture. Kara deemaa, saree fi sarseen maqaa keen laga meeqa akka ce’aa turee fi jiru. Maqaa kee waammachaa dhangaa, maallaqa hedduu warra keerraa akka nyaachaa jiran.
Mee egaa abbaan dhugaa ana moo isaanii? Kaleessa gaafa anii fi ati dhagaa boraafannee,rakkoo fi gadadoo hedduu waliin dabarsine sana nu barbaadanii beekuu? Moo har’a ati gati qabeettii ta’uu kee baran jennaan hunduu sitti miixachuu fi hiixachuu baay’isanii? Anoo naaf hin galu…. Mee yaa gati qabeettii koo, mi’ooftuu akka dammaa bakka jirtuu takkaa qofa sagalee kee na dhageessisi. Asin jira jedhii garaa na ciibsi. Hin turiin yoo turte galaanatu guuta. Awaash, Gibetu guuta. Guutan daaktuun biyyaa dhumeera. Kaan ni godaane, kaan ni boqote. Kan hafe ana osoon si eeguu anaanis lolaan gannaa na fuudhee galaana ati irra ceetutti na makee du’aa koo akka hin arganne ammumaan laphee fi qalbii kee keessatti galmeessi.
Mee yoo biyya alaas jiraatte naa bilbili. Yoo dadhabdes dhaamsaanis ta’u afuura natti baafadhu. Sumaaf qalbiin na bada. Jiruun hadhaa natti ta’ee afuurri gurraan na bahaa jira. Waa nyaadhu dhiiga naaf hin ta’u, nyaadhus afaan dhiiga dhiiga natti jedha. Akkamittan nyaadhaa? Atoo hin jirtu, ykn daftee hin dhuftu.
Jaalallee koo Bilisummaa (Diimokiraasiif)!!